I-Cottage cheese kunye nekhekhe le-almond (i-gluten-free) - Iresiphi | Indlela yokupheka
I-Cottage cheese kunye nekhekhe le-almond (i-gluten-free)
UAlicia tomero | 30/11/2021 22:37 | Isidlo sakusasa kunye nokutya okulula, Iresiphi, Iindlela zokupheka zasimahla zeGluten
Uya kuyithanda le keyiki njengoko iyiresiphi eyenziwe ngento ethambileyo i-cottage cheese kunye ne-almonds yomhlaba. Le recipe ilungele abantu Ukunganyamezeli kweGluten. Uya kubona ukuba ungayenza njani le keyiki ethambileyo ngomonde omncinci kwaye ngokulula okukhulu. Kuya kufuneka ulandele amanyathelo ngokweenkcukacha ukuze ufumane le dessert inkulu.
Ukuba uthanda olu hlobo lweeresiphi ezithambileyo, ungazama ukwenza zethu ikeyiki e-orenji kunye walnut kunye itshokolethi.
Ixesha lokulungiselela: 80 m
Ixesha lokupheka: 60 m
Ixesha elipheleleyo: Iiyure ezintlanu 2 m
125 g ibhotolo ethambileyo
I-300 g yetshizi yetshizi
50 g umgubo wengqolowa
190 g yeamangile omhlaba
Amaqanda ama-4 ngobukhulu uL
Amacephe amabini e-vanilla extract
Izandla ezibini zeealmond ezisikiweyo
Iipuni ezimbini zeeshukela eziyimpuphu
Sibeka i ibhotolo kunye noshukela. Ngomxube wezandla kunye neentonga sixuba de kube izithako zidibaniswe.
Sahlula abamhlophe kunye nemithubi. Yongeza ibhotolo kunye noshukela, i-vanilla extract kunye umthubi weqanda enye ngexesha, kwaye sixuba nomxubi wethu. Emva koko songeza i-vanilla extract kwaye siqhubeke nokuxuba.
Sifaka umgubo iiamangile kunye nomgubo wengqolowa kwaye sabetha.
Sidibanisa curd kwaye sivuselela. Sivumela izithako zidibanise kakuhle.
Kwisitya sibeka i kucace kwaye ngeentonga ezicocekileyo sizibetha de zibe zenzekile kumda wekhephu.
Sidibanisa abelungu Kumxube wangaphambili kunye ne-spatula siyivuselela ngokukhawuleza kunye neentshukumo ezigubungelayo ukwenzela ukuba umthamo womxube ungawenzi.
Silungiselela a ukungunda ngeenxa zonke enokungabunjwa kwaye inokungena e-oveni. Inokuba ngeenxa zonke 20cm ububanzi kunye ne-silicone. Kwisiseko sokungunda ndibeke isiqwenga sephepha lokubhaka ukuze sikwazi ukukhulula ikhekhe ngcono kakhulu ekupheleni kokupheka kwayo. Sithululela umxube kwaye sigubungele ubuso bayo kakuhle. Sibeka i Zalisa izandla ezibini zeamangile ngaphezulu. Sibeka kwi-oven ukuya 175 ° imizuzu engama-60, ngobushushu phezulu naphantsi naphakathi. Njengoko kuphekwe, kufuneka kuqatshelwe ukuba ii-almonds azixutywanga kakhulu. Ukuba kunjalo, sinokubeka isiqwenga sefoyile ye-aluminium malunga nesiqingatha sexesha lokupheka kude kube sekupheleni.
Xa sele sibhakiwe siyiyeke ipholile kwaye siphake nayo iswekile ephothiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziya » Iresiphi » I-Cottage cheese kunye nekhekhe le-almond (i-gluten-free)
Ilula kakhulu inkwenkwezi yeKrisimesi
I-Lasagna kunye nenyama kunye nama-mushroom